Asomafo 26 NA-TWI - Paulo yi ne ho ano - Ɔhene Agripa ka - Bible Gateway
Asomafo 25Asomafo 27
Asomafo 26 Nkwa Asem (NA-TWI)
26 Ɔhene Agripa ka kyerɛɛ Paulo se, “Afei mema wo ho kwan sɛ wuyi wo ho ano.” Paulo maa ne nsa so kasae se, 2 “Ɔhene Agripa! Ɛyɛ me anigye sɛ ɛnnɛ manya mu kwan gyina w’anim ha reyi me ho ano wɔ asɛm a Yudafo aka atia me no ho. 3 Nea ɛma meka saa ne sɛ, wunim Yudafo mmara ne wɔn amanne nyinaa pefee. Enti mesrɛ wo, tɔ wo bo ase tie me.